ဇဝန၊ စာရေးဆရာ - ဝီကီပီးဒီးယား
၁၂၇၃ ခုနှစ်၊ နတ်တော် လပြည့်ကျော် ၅ ရက်
၁၉၈၃ ခု မတ်လ ၈ ရက်
ပရော်ဖက်ဆာ ဇဝနော စကီး၊ မောင်သိန်း (ပြည်)၊ ရတနာသိန်း၊ ဦးသိန်း (ဇဝန)
မထားအိ (ဝါ) ထား
ဦးဖိုးမင်း + ဒေါ်မြ
၁ ဇဝန (၁၉၁၁ - ၁၉၈၃)
၂ ဆရာ ဇဝန ရေးသား ပြုစုခဲ့သော စာအုပ်များ
ဇဝန (၁၉၁၁ - ၁၉၈၃)[ပြင်ဆင်ရန်]
၁၉၂၄-ခုနှစ်၌ 'ဘားမားဘွိုင်း မဂ္ဂဇင်း' တွင် 'ဇာနည်ဘွား' ဝတ္ထုကို ရေး၍ စာပေ လောက တွင်းသို့ စတင် ဝင်ရောက် ခဲ့သည်။ ၁၉၂၇ တွင် 'လန်ဒန်အတ် မဂ္ဂဇင်း' ၌ 'ဇဝန' ကလောင် အမည် သုံး၍ ဝတ္ထု ရေးခဲ့သည်။ အချစ်၊ အလွမ်း၊ စုံထောက်၊ ဟာသ၊ အသော့အထေ့ စာပြောင်များ (သရော်စာများ) ရေးရာတွင် ထင်ရှားသည်။ ကယ်ရီကေးချား(ကာတွန်း) ရေးဆွဲရာ တွင်လည်း ပြောင်မြောက် လှသည်။ ဓာတ်ပုံ ပညာ (၁၉၃ဝ)၊ ကော်လိပ် ကျောင်းသာ (၁၉၃၅ - ၃၇)၊ ကောလိပ်ကြမ်းပိုး (၁၉၃၈)၊ ကောလိပ်ဂျင် (?)၊ တို့ကျောင်းသား (၁၉၃၉)၊ ဤရူပ (၁၉၄ဝ)၊ ရွှေဝါဆန် (၁၉၄၅)၊ မြို့လုံးပတ်လည် (၁၉၄၅)၊ ဦးလေးပြောမယ် (၁၉၄၅)၊ ဆာယိုးနယား (၁၉၄၆)၊ ဒိုးဝမ်းကီး (၁၉၄၈)၊ အပါ ပုံပြောမယ် [ဇဝန ပုံပြင်] (၁၉၄၉)၊ ဆိုးပေ (?)၊ အရှေ့ဆီက လေနီကြမ်း [ဘာသာပြန်] (၁၉၅၂)၊ ဟာသ စင်တော်ကြီး (၁၉၇၃)၊ ဘယ်ကျော် (၁၉၇၇)၊ ပန်းဝတ်ရည် ကလေး ကဗျာများ (၁၉၇၉)၊ ဇဝန၏ ဇဝန (၁၉၈၃) တို့မှာ ထင်ရှားသည်။ ပရော်ဖက်ဆာ ဇဝနောစကီး၊ မောင်သိန်း (ပြည်)၊ ရတနာသိန်း၊ ဦးသိန်း (ဇဝန)တို့သည် ကလောင်ခွဲများ ဖြစ်ကြသည်။
၁၉၈၃ ခု မတ်လ ၈ ရက် အင်္ဂါနေ့ နံနက် ၁ဝ နာရီ ၂ဝ မိနစ်တွင် ရန်ကုန် ဆေးရုံကြီး၌ ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။
ဆရာ ဇဝန ရေးသား ပြုစုခဲ့သော စာအုပ်များ[ပြင်ဆင်ရန်]
၁ ပန်းဝတ်ရည် ကလေး ကဗျာများ ၁၉၇၉ ကဗျာပေါင်းချုပ်
၂ စာပေ ဆွေးနွေးပွဲ ရေးသူ သိန်းဖေမြင့်နှင့် ဇဝန စာပေဆိုင်ရာနှင့်ပညာပေး
၃ ဓာတ်ပုံ ပညာ ရေးသူ မောင်သိန်း (ပြည်) ၁၉၃ဝ စာပေဆိုင်ရာနှင့်ပညာပေး
၄ ဆာယိုးနရာ ၁၉၄၆ နိုင်ငံရေး
၅ ဘုရင်ခံ ၁၉၄၆ နိုင်ငံရေး
၆ မြို့လုံးပတ်လည် ၁၉၄၅ နိုင်ငံရေး
၇ ဦးလေး ပြောမယ် ၁၉၄၅ နိုင်ငံရေး
၈ ဇဝန ပုံပြင် ၁၉၃၉ ပုံပြင်ပေါင်းချုပ်
၉ အပါ ပုံပြောမယ် ၁၉၄၅ ပုံပြင်ပေါင်းချုပ်
၁၀ အရှေ့ဆီက လေနီကြမ်း ၁၉၅၂ ဘာသာပြန်
၁၁ အာရပ် အစ္စရေး စစ်နှင့်ဆွေးနွေးပွဲ ၁၉၇၈ ဘာသာပြန်
၁၂ ကားထဲက မိန်းကလေး ၁၉၇၅ ဝတ္ထု
၁၃ ကောလိပ် ကျောင်းသား (ပထမပိုင်း) ၁၉၃၅ ဝတ္ထု
၁၄ ကောလိပ် ကျောင်းသား (ဒုတိယပိုင်း) ၁၉၃၆ ဝတ္ထု
၁၅ ကောလိပ် ကျောင်းသား (တတိယပိုင်း) ၁၉၃၆ ဝတ္ထု
၁၆ ကောလိပ် ကျောင်းသား (စတုတ္ထပိုင်း) ၁၉၃၇ ဝတ္ထု
၁၇ ကျွန်တော့လင် ၁၉၆၅ ဝတ္ထု
၁၈ ချစ်နှောင်းသက်လယ် ၁၉၆၆ ဝတ္ထု
၁၉ ချစ်ဦးသခင် ၁၉၇၅ ဝတ္ထု
၂၀ ဆိုးပေ ၁၉၇၃ ဝတ္ထု
၂၁ ဆွေးကြွေလုသဲနှင့် မိုက်မလင်းနိုင်သူ ၁၉၆၁ ဝတ္ထု
၂၂ ဇမ္ဗူတလူ ၁၉၇၇ ဝတ္ထု
၂၃ ဇွတ်သမား ၁၉၄ဝ ဝတ္ထု
၂၄ တောက်တဲ့မာယာ ၁၉၆၈ ဝတ္ထု
၂၅ တို့ကျောင်းသား ၁၉၇၆ ဝတ္ထု
၂၆ ဒိုးဝမ်းကီး ၁၉၆၅ ဝတ္ထု
၂၇ ပါးအို့နီ ၁၉၃၉ ဝတ္ထု
၂၈ ပီယဆေး၊ ဝတ္ထုညွှန်း ဝတ္ထု
၂၉ ပင့်ကူအိမ် ၁၉၃၅ ဝတ္ထု
၃၀ ပျိုတို့လင် ၁၉၇၆ ဝတ္ထု
၃၁ ဘုနှင့်ဘောက် ၁၉၇၃ ဝတ္ထု
၃၂ ဘယ်ကျော် ၁၉၇၇ ဝတ္ထု
၃၃ ရွှေဝါဆန် ၁၉၄၅ ဝတ္ထု
၃၄ သတို့သမီး အလိုရှိသည် ၁၉၆၃ ဝတ္ထု
၃၅ သားရွှေစင် ၁၉၆၁ ဝတ္ထု
၃၆ သူပုန်မ ၁၉၄ဝ ဝတ္ထု
၃၇ သူ့မယား ၁၉၄၂ ဝတ္ထု
၃၈ သင်္ကန်းဝတ် ၁၉၄၃ ဝတ္ထု
၃၉ အပျိုစစ်ပါပဲရှင် ဝတ္ထု
၄၀ ဤရူပ ၁၉၅၃ ဝတ္ထု
၄၁ ဟာသ စင်တော်ကြီး ၁၉၇၃ ဟာသစာပေပေါင်းချုပ်
၄၂ ဇဝန၏ ဇနဝ ၁၉၈၃ အတ္ထုပ္ပတ္တိ
မလိခ။ မြန်မာ စာပေ အဘိဓာန် (၂)။ စာ ၁၉၃ - ၁၉၆။
မလိခ။ မြန်မာ ဝတ္ထု အညွှန်း(၂)။ စာ ၁၁၂ - ၁၂၉။
မြန်မာ့ စွယ်စုံကျမ်း နှစ်ချုပ် (၁၉၈၄)။ စာ ၁၇၂ - ၁၇၃။
နှစ်ဆယ် ရာစု မြန်မာ စာရေးဆရာများနှင့် စာစုစာရင်း။ စာ ၅၇ - ၆ဝ။
မဌေးဌေးခင် (ဝိဇ္ဇာဘွဲ့)။ ဇဝန စာစုစာရင်း (၁၉၈၃)။
ဇဝန။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဖော်ရသော်၊ ငွေတာရီ (အောက်တိုဘာ ၁၉၆ဝ)။ စာ ၂၆-၂ရနှင့် ၃၂၈ - ၃၃၄။
စာတည်း အဖွဲ့။ ဇဝန၊ မြဝတီ (ဖေဖော်ဝါရီ ၁၉၅၆)။ စာ ၄-၈။
စာတည်း အဖွဲ့။ ဆရာဇဝန [၁၉၁၁-၁၉၈၃]၊ ရှုမဝ (ဇူလိုင် ၁၉၈၇)။ စာ ၁၂၆။
မောင်ဇေယျာ။ ဇဝန (၁၉၁၁-၁၉၈၃)၊ စာအုပ်လောက (ဇွန် ၂ဝဝ၄)။ စာ ၂ဝ - ၂၃။
နာရေးကြော်ငြာ၊ လုပ်သား ပြည်သူ့နေ့စဉ် (၉-၃-၈၃)၊ စာ ၇။]
↑ ပြန်ကြားရေးနှင့် ပြည်သူ့ ဆက်ဆံရေး ဦးစီး ဌာန (ရုံးချုပ်) စာတည်း အဖွဲ့မှ စုဆောင်း ပြုစုသော 'နှစ်ဆယ် ရာစု မြန်မာ စာရေး ဆရာ များနှင့် စာစု စာရင်း' စာအုပ် ၂ဝဝ၃ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ(ပထမ အကြိမ်) ပညာရွှေတောင် စာအုပ်တိုက်
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဇဝန၊_စာရေးဆရာ&oldid=147354" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၇ ဇွန် ၂၀၁၂၊ ၀၅:၄၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။